Mohamed Salah Oo Shaaciyey Go’aanka Mustaqbalkiisa Iyo Kooxda Uu U Ciyaari Doono Sannadka Dambe | Dayniile.com
Home Warkii Mohamed Salah Oo Shaaciyey Go’aanka Mustaqbalkiisa Iyo Kooxda Uu U Ciyaari Doono...
Xiddiga reer Masar ee Mohamed Salah ayaa Liverpool u sheegay go’aanka mustaqbalkiisa xilli hadal ka taagan yahay qandaraaskiisa kooxda oo xilli ciyaareedkan socda iyo midka dambe oo kali ahi ka hadhsan yahay heshiiskiisa.
Mohamed Salah ayaan wali ogolaanin inuu saxeexo heshiis cusub oo ay Liverpool u bandhigtay, waxaanu ku xidhay shuruudo adag isagoo dalbanaya mushahar toddobaadkii gaadhaya Nus Malyuun Gini, kaas oo ka dhigaya ciyaartoyga ugu mushaharka badan horyaalka Premier League.
Toddobaadkan waxa Ingiriiska gaadhay wakiilka Mohamed Salah oo lagu sawiray iyagoo ku jira hawlo shaqo oo ay ka mid yihiin xayaysiin ay usoo sameeyeen shirkadda Nike, waxaana sababta ugu weyn ee uu wakiilku u tegay ay tahay inuu Liverpool kala hadlo mustaqbalka laacibkan.
29 jirkan oo xilli ciyaareed aad u wanaagsan ku qaadanaya Liverpool ayaa 11 ciyaarood oo dhamaan tartamada ah oo uu saftay waxa uu dhaliyey 12 gool, halka uu sameeyey caawin kale, waxaanu hadda isku diyaarinayaa kulanka Axadda ee Manchester United.
Waxa uu Mohamed Salah tibaaxay in wax walba ay ku jiraan gacanta Liverpool oo kooxdu ay go’aan ka gaadhayso sida ay wax noqonayaan, laakiin isaga uu qorshihiisu yahay inuu sii joogo Anfield, waxaanu yidhi: “Haddii aad aniga i weydiiso, waxaan jeclaan lahaa inaan joogo illaa maalinta ugu dambaysay waayahayga ciyaareed, laakiin anigu wax badan kama odhankaro, gacantaydana kuma jiraan
“Kooxda ayay ku xidhan tahay waxa ay doonayso, aniga ma aha.”
Mohamed Salah waxa uu intaa ku daray, in waqtigan aanu xitaa qiyaasi karayn inuu Liverpool ka hor yimaaddo, waxaanu yidhi: “Waqtigan, iima mu8uqato anigoo ciyaar kaga hor imanaya Liveprool. Taasi murugo ayay i gelin doontaa. Way adag tahay, ma doonayo inaan ka hadlo laakiin haddii ay dhacdo murugo ayay igu abuuri doontaa.”
Mar la weydiiyey bal inuu xaqiijin karo inuu Liverpool sii joogayo, waxa uu yidhi: “Waqtigan iima muuqato inaan koox kale oo Liverpool ka hor imanaysa u ciyaari doono, laakiin waynu arki doonaa waxa dhaca mustaqbalka.”
Qaybta dambe ee hadalka Mohamed Salah, waxa ka muuqata in wali uu jiro farqi u dhexeeya kooxdiisa oo aanay wax is-faham ah ka gaadhin heshiiskiisa, laakiin wali uu qabo rajo ah in qandaraaska uu kordhin doono.
Si kastaba, kooxaha waaweyn ee Yurub, sida PSG, Real Madrid iyo Barcelona ayaa lala xidhiidhinayaa Mohamed Salah, waxaanay kooxdiisu ku qasbanaan doontaa inay iibiso bisha June haddii inta ka horreysa aanu heshiis cusub saxeexin, haddii ay sidaas samayn waayaanna waxa uu si xor ah uga tegi doonaa dhamaadka xilli ciyaareedka dambe.
Previous articleMADAAFIIC IYO HUBKA CULUS OO LAGA MAQLAYO FURIMAHA MAGAALADA GURICEEL
Next articleWararkii Ugu Dambeeyay Xaalad Kacsanaan Ah Oo Saaka Ka Jirta Magaalada Guriceel
Kuuriyada Waqooyi ayaa ugu yaraan hal gantaal oo nuuca ballistigga ah ku ridday biyaha badda dhanka bari ee gacanka,sida ay ka dhawaajiyeen Kuuriyada Koonfureed...
Sawirro: Raiisul Wasaare Rooble oo shir muhiim ah ka daah-furay Muqdisho
Booliska Minneapolis oo ka badbaaday afti lagu kala diri lahaa